Safika phaya sabona umahluko omkhulu kwatsho kwasa kuthi ukuba ayikho le nto ibithethwa leli qela liphikisayo. Kaloku le genge, ngabantu abasoloko besenzela ixhala lokuba isibhakabhaka siza kusiwela imihla nezolo. Thina sibone ukuba abantu baseMzantsi Afrika bayaxhatshazwa ngoongxowa ngokuba banikwe amatyala abangakwaziyo ukuwahlawula. Lo mkhuba sowude wanwenwela nakwaba barhola ipeyi.
Sibone ukuba masingenelele njengorhulumente okhathalela abantu baseMzantsi Afrika ngokuthi senze lo Mthetho oYilwayo. Sifike sadibana nawo onke amahlakani eebhanki zase-UK. Kudliwano-ndlebe nawo ayidandalalizisile into yokuba ukusetyenziswa kwalo Mthetho oYilwayo akuzange kube nazimpembelelo zigwenxa kuqoqosho lwase-UK. Bubuxoki bodwa obu buthethwa ngaba bantu. [Kwaqhwatywa.] Ngelo nyathelo siye asakwazi ukuba singawupasisi lo Mthetho oYilwayo kwaye sesona sizathu esabangela ukuba siwukhawulezise. Abantu bethu bayaphela apha phandle kwaye bayaxhatshazwa ngaba ngxowa.